Huawei MateView: Onye nleba anya dị elu na -eme ka nrụpụta gị ka mma | Akụkọ Ngwa
Huawei na -aga n'ihu ịgbasa ụdị ngwaahịa ndị ahịa ya na ụzọ dị iche iche, n'oge na -adịbeghị anya, anyị agwala gị otu ị ga -esi meziwanye nke ọma arụmọrụ nke netwọọdụ WiFi nke ụlọ gị na ndị na -anya ụgbọ elu gị, ị makwaara nke ọma ihe nrụpụta ọhụrụ ha gbasara elele smart. Taa, anyị na -elekwasị anya n'ihe ruo ugbu a ọ dị ka ebe a na -edeghị akwụkwọ maka ụlọ ọrụ Eshia.
Anyị na -enyocha Huawei MateView nke ọma, onye nleba anya na n'ihi usoro ya, imewe ya na njiri mara ya na -enye gị ohere imeziwanye nrụpụta gị n'ụzọ kachasị "adịchaghị". Chọpụta anyị atụmatụ Huawei MateView na ihe kpatara o jiri bụrụ otu n'ime ndị na -enyocha ọgba aghara n'ahịa.
1 Akụrụngwa na imewe: Ụzọ Huawei bụ nke ziri ezi
3 Njikọta na arụpụtaghị aka na aka
4 Jiri ahụmịhe dakọtara n'ọtụtụ ọnọdụ
Akụrụngwa na imewe: Ụzọ Huawei bụ nke ziri ezi
Onye nleba anya na -ekwu ọtụtụ ihe gbasara "ntọlite", nke Huawei maara ma chọọ ilekwasị anya ya niile. Ihe nleba anya a nwere ihe pere mpe yana ihe “adịchaghị” iji bilie n'oge ahụ. N'ikwu eziokwu, ị ga -eji ọtụtụ ụbọchị gị elele ngwaọrụ a, gịnị ma ị chepụta nke mara mma n'ezie? M ga -ekwu n'emeghị ihere na anyị na -eche ihu imepụta ụlọ ọrụ ahụ lee ihu na ihu na iMac nke Apple, ihe ụdị ole na ole nwere ike tinye na mbido ha. Ị nwere ike ịzụta ya na ọnụ ahịa dị egwu ozugbo na Amazon.
Akụkụ: 28,2 sentimita
Isi: Ndozi ịdị elu nke milimita 110 na ọchịchọ dị n'etiti -5º na + 18º
agba: Ejiri alumini kpochapụrụ
Ọ nwere ogwe aka wuru nke ọma ejikọtara na nyocha ahụ site na nkwado okirikiri nke na-agbanwegharị na mkpagharị dị elu, na-anọkarị na vetikal, ee. N'ime kọlụm a, ị ga -ahụ sistemụ ụda stereo nke anyị ga -ekwu maka ya ma emechaa, yana njikọ na ọdụ ụgbọ mmiri, ezi ode na minimalism, mwekota na ịma mma. Anyị enwebeghị ike ịnweta ozi gbasara ịdị arọ nke ngwaahịa a, mana na nnwale anyị, anyị chọpụtara na dị ka ezigbo ngwaọrụ na -eji ihe "adịchaghị", ọ na -atụ nnukwu. Ojiji ihuenyo bụ 94%, nke na -agba akaebe ọrụ emere n'akụkụ a.
Anyị nọ n'ihu otu panel LCD - IPS nwere akụkụ nke 3: 2, dị ka ụfọdụ kọmpụta na mbadamba Huawei. A na -ekwutọ akụkụ a ka oge na -aga iji nweta ngosipụta ihuenyo, mana ọ nwere ezi uche ọzọ na ọkwa nrụpụta, anyị ga -elekwasị anya na ya ma emechaa.
Anyị nwere sentimita 28,2 na mkpebi 4K + (3.840 x 2.560) nke na -ejikọ teknụzụ HDR400, maka nke a ọ na -eji a Ndụmọdụ 500 nchapụta, n'elu ọkọlọtọ ahịa maka ụdị panel a. Anyị nwere ọnụego ume ọhụrụ "naanị" 60 Hz nke na -echetara anyị na anyị na -eche ihu ileba anya lekwasịrị anya na imepụta ihe, yana oke nke 1.200: 1 iche.
Anyị nwere 98% DCI-P3 nke gamut agba na 100% nke sRGB, dị mma maka foto na ndezi vidiyo, na-enye ihe dị ka ijeri ijeri 1.070 nwere ezigbo nkenke? E <2. Kọmitii a egosipụtala akụkụ nlele mara mma na nnwale anyị yana nchapụta nke na-echetara anyị ngwa ngwa na nke a bụ ngwaahịa dị elu karịa, na-enwe obi ụtọ na VESA gbaara ezi HDR400, nke ka bụ ọkwa n'okpuru..
Njikọta na arụpụtaghị aka na aka
Igwe okwu abụọ etinyere n'ime na-eburu ụda stereo ruo mita 4, ọ bara uru maka iso ndị na-enyere aka mekọrịta ihe, ndezi vidiyo na oku ọgbakọ.
N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike were ohere iji otu ọdụ ụgbọ mmiri USB-C dị ka mgbakwunye kọmputa anyị, n'otu oge ọ na -ebo ya ebubo wee tinye ya na HUB n'akụkụ ya. Ọ bụghị ihe niile dị ebe a, ebe ọ bụ na Huawei chọrọ imechi ahụmịhe nke MateView ya site na ime ka ọ dabara na ọtụtụ teknụzụ etinyere na ngwaọrụ ika:
Ịkpọghachi ikuku na ntule
Njikọ ikuku na ndọtị desktọpụ site na -eweta ekwentị gị nso na ntọala
Maka nke a, ụdị nwere njikọ ikuku na -eji kaadị network WiFi na Bluetooth 5.1, agbanyeghị, ntule site na eriri USB-C na-arụ ọrụ na ụdị niile.
Jiri ahụmịhe dakọtara n'ọtụtụ ọnọdụ
Anyị na -amalite site na "mgbasa ozi mgbasa ozi", n'agbanyeghị na ọ ga -abụ ihe na -adịghị ahụkebe ụbọchị ndị a iji gosipụta ọdịnaya na enyo nwere akụkụ, a na -eji eriri ojii ya edozi ya n'elu na ala. N'aka nke ya, inwe HDR400 na ọmarịcha nits 500 na -akpọ anyị oku ka anyị lee usoro, YouTube, Twitch ma ọ bụ onye na -eweta ọkacha mmasị anyị. Iji mechie ahụmịhe ahụ Huawei arịgoro na ntọala MateView ndị na-ekwu okwu 5W abụọ na-enye ụda stereo nwere oghere na-akwalite bass na nnwere onwe DSP nnwere onwe, nsonaazụ ya: Otu n'ime ahụmịhe kachasị mma anyị nwerela na ọkwa ụda na onye na-enyocha njirimara ndị a.
Iji soro onye nleba anya na interface onye ọrụ ya nwere nghọta anyị nwere ihe mmetụ aka na ala bezel nke Huawei kpọrọ SmartBar, Nke a nwere usoro mmụta na -atọ ụtọ, mana ozugbo ịmara ya, ọ bụ nkọwa dị mma na ngwaọrụ:
Otu mgbata> Kwenye
Mgbata abụọ> Laa azụ
Oke njikwa> Mịgharịa otu mkpịsị aka
Gbanwee ntinye> Jiri mkpịsị aka abụọ mịgharịa
Ma ọ bụghị, Achọpụtara m na nhazi nhazi agba dị egwu, na -enye gị ohere idezi vidiyo na foto nwere ezigbo nsonaazụ, na mgbakwunye, Nkesa 3: 2 na -eme ka nrụpụta dị mma n'ihi imewe windo yana ozi enyere n'ime ha. Iji rụọ ọrụ n'otu nleba anya, panoramic panel (belụsọ na ọ bụ UltraWide) na -emebi imewe windo na ọ bụghị kpọmkwem nhọrọ kacha mma mgbe ị na -arụ ọrụ. Nlaghachi nke akụkụ 3: 2 emeela ka ndị anyị na -eji ihe nleba anya a na -arụ ọrụ na -amụmụ ọnụ ọchị.
Onye nleba anya Huawei a na -ejikọ imewe, ịdị mma yana njikọta ihe dị iche iche nke gbakwunyere uru mgbe ị na -anọ ogologo oge na tebụl gị. Ịdị ike nke iweta 3: 2 na -enweghị ihere na ịkụ nzọ na ime ihe pere mpe na -eme ka onye nleba anya a bụrụ otu n'ime nhọrọ mbụ n'etiti etiti / elu ahịa. N'ụzọ doro anya, ọ na -apụ ozugbo na ngalaba "gaimng" ebe Huawei enyela MateView GT nke ọzọ, n'agbanyeghị nke a, ọ nwere arụmọrụ pụtara ìhè na oriri ọdịnaya ihe nkiri. Ọnụahịa ya dị n'etiti € 599 maka ụdị ọkọlọtọ yana € 649 maka ụdị nwere amụma ikuku, ịmara ndị nleba anya ndị ọzọ yiri ibe ha na akwụkwọ, mana adịchaghị ka otu egwuregwu mgbe ị hụrụ ha na desktọpụ.
Nhazi dị elu na ihe
Ogwe dị mma nke ukwuu, yana ọdịdị kacha mma maka imepụta ihe
Ahụmịhe mgbasa ozi dị mma nke ukwuu
Njikọ dị elu na njikọta
Ozi gbasara ibu na nha anaghị efu
SmartBar chọrọ mmụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei Mate View, ụyọkọ nke ihe ịga nke ọma na -eme ka nrụpụta gị ka mma [nyocha]